Category:Bir Ma Ahe - Wikipedia
Category:Bir Ma Ahe
In kastoo curiyaha birta shan-jeer laab ka badan yahay curiyaha bir ma ahe, labo ka mid ah bir ma ahe - Haydarojiin iyo Ogsajiinta - ayaa waxay yihiin boqolkiiba sagaal-iyo-sagaashan (99%) Koonka muuqda; iyo hal curiye bir ma ahe ah, waa Ogsajiinta, ayaa waxay tahay in ku dhow 50% samayska qolofka dhulka, badaha iyo cirka dhulka. Intaas waxaa dheer, jidhka noolaha dhamaantiis wuxuu ka samaysan yahay bir ma ahe iyo isku dhisyo ka samaysan bir ma ahe.
Bogagga ku jira qeybta "Bir Ma Ahe"
waxaa meeshaan ku jira 112 oo maqaallo ah waxeena ku jiraan qeybtaan, waana 112 gud ahaan.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Category:Bir_Ma_Ahe&oldid=138797"